Arts & Humanities » သင်ယူခြင်း…။	14
သင်ယူခြင်း လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ စတေးတပ်စ် လေးတွေကို
တွန်းတာမြင်နေကျဆိုတော့ လေပေါ်ပျံတဲ့ Helicopter ကို ဝိုင်းတွန်းနေကြတာလည်းတွေ့ရော ရုတ်တရက် ပျက်နေတယ်လို့ပဲ လူပြိန်းတွေး တွေးမိလိုက်တာပေါ့….
သိပ်ပြောချင်တဲ့စိတ်အခံကရှိတော့ အပျော်သဘော စ နောက်ချင်စိတ်နဲ့ ပုံပြခက်ဆစ်ဆိုပြီး တင်လိုက်မိတယ်….
သို့သော်ငြားလည်း ဒါမျိုးတွန်းတာဟာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဆိုတာကို အောက်က ကွန်မန့်တွေမှာ
သေချာရှင်းပြပေးတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေကြောင့် ဒီပုံပြခက်ဆစ် တင်မိတဲ့ အတွက် တာဝန်ယူ ရှက်ရွံစွာဖြင့် သက်ဆိုင်သူများကို တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်……
ပို့စ်ကိုတော့ ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ်ပြန်သတိပေးမိနေအောင် မဖျက်ဘဲထားလိုက်ပါ့မယ်
မှားလို့တောင်းပန်တာဟာ ရှက်စရာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးလေ
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက် က ဆရာကြီးမောင်ထင်ရဲ့ ငဘ ၀တ္ထုကို ဒါရိုက်တာ ခင်စောမျိုးက ကျော်သူ၊ ကျော်ရဲအောင်၊ စိုးမြတ်သူဇာ တို့နဲ့
ဟော…အခုအပတ် အိုအေစစ်ဂျာနယ် ထဲမှာ အိုအေစစ် အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ရဲ့ တောင်းပန်စာ
ပြန်ပြင်လို့ မရတော့တဲ့ ဒီဖြစ်ရပ် ဆီကနေ အမှား ဆိုတာ သေးသေးလေးပဲ ဖြစ်နေပါစေ…
ဟေသီ says: အခု ရုပ်ရှင်ရုံမှာ တင်နေတဲ့ Unfriended လည်း အဲ့သဘော ခပ်ဆင်ဆင်ကို သရဲကား ဆန်ဆန် ရိုက်ထားတာ မျိုးပဲ။ တကယ်တမ်း Facebook သုံးရင် သဘောကျ စရာ အကျင့်တစ်ခု သင်ယူမိတာလေးတော့ ကြိုက်တယ်။ ဘာမှ မလုပ်ခင် လုပ်သင့်ရဲ့လား တွေးမိတာကိုပါ။ အရင်က ကိုယ်မှားသွားလည်း လူတစ်ဦး နှစ်ဦးလောက်ပဲ သိလောက်မှာဆိုတော့ သတိမထားမိတာတွေ အများကြီးပါ။ အခုတော့ မြန်မာစာ ဖတ်တတ်သူ လူအားလုံး သိသွားတော့မှာ၊ ကိုယ့်အမှားကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာသူတွေလည်း များလာတော့မှာ ဆိုတော့ သတိလေး ထားတတ်သွားတာကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ အခုလည်း ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ထပ် သင်ယူသွားပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ ဟေသီ ;
aye.kk says: ဇီဇီပြောသလိုပါဘဲ။။
kai says: ဦးအောင်သောင်းအသုဘကိစ္စမျိုးက.. လူအများစုကြီးက.. တကယ်ပျော်ကြရင်တော့ လုပ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်..။
ကျုပ်အနေနဲ့ကတော့.. “ဆိုက်ကား နင်းစားသူ ဆိုက်ကားသမားများမှာနဂိုကမှ အနှိမ်ခံ ဘ၀ များ ဖြစ်နေကြရသည့်အထဲ” အဲဒီလို..အတွေးအခေါ်ဖြစ်နေစေတဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ မိုင်းဆက်ကြီးကိုပြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်..။
“ငဘက ငဘ ဇာတ်ပဲ ဆိုတော့ ဆိုတာက.. စကားထောက်နေလို့ပါ..။ စာရေးဆရာမကြီးဒေါ်မြသန်းတင့်ရဲ့.. ဓားတောင်း၍မိမိလယ်ပင်းကိုဖြတ်မည်..၀တ္ထုဖတ်ဖူးတဲ့.. စာရေးဆရာမတချို့တွေလိုများဖြစ်နေမလားလည်းတွေးမိရဲ့..
Mike says: .ဆိုက်ကားသမားဇတ်လမ်းအမှန်က….ဒီမှာပါ
kai says: ဟားဟား… ဖေါ်ကုန်ပြီ..။
ဦးဝင်းထိန်နဲ့.. အမူတွဲတခုထဲဆိုတာကတော့.. အခုမှသိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: အဲဒီဇာတ်လမ်းထဲက တကယ်အတုယူဖို့ကောင်းတယ်။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဆိုင်မဆိုင်တော့ သိပါဘူးနော်။ ရန်ကုန်က နာမည်ကျော် ပုံနှိပ်တိုက် ပိုင်ရှင်ဟာလည်း ဆိုက်ကားနင်းစားခဲ့တာပါပဲ။ သူက သူ့အိမ်မှာ သူနင်းခဲ့တဲ့ ဆိုက်ကားကို သ ထားတာ။ သူ့ရဲ့ ဖွားဖက်တော် ပုံစံမျိုး။ ဒီဆိုက်ကားကို ညွှန်းစရာပေါ့လေ။ တော်ရုံလူဆိုရင် – သြော် ဒီလောက်အောက်သက်ကျေတဲ့လူဆိုပြီး အထင်တွေ စွတ်ကြီးသွားတာပဲ။ ဒါ (ဟဲဟဲ မျှစ်ကြော် ညစ်ချင်လို့) သူဌေးတွေရဲ့ ကိုယ့်ကျောကိုယ်သပ်ပြတဲ့ လုပ်ပေါက်လေးတွေပါ။ အမှန်တကယ်မှာ အဲဒီလူ မတရားချမ်းသာသွားခဲ့တာ ၂လုံးဒိုင်လုပ်လို့ပါ။
ဦးကျောက်ခဲ says: ဖွဘုတ်မှာလည်း သင်ယူရ ၊ ဂဇက်ရွာမှာလည်း သင်ယူရ…
မသေမချင်း အာရုံငါးပါးကနေတဆင့် သင်ယူနေရတဲ့ဘဝပါ ဆြာဘလက်ရယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ ကိုကျောက် , မမ , မပြုံး ;